Dhukkubni ilkaanii maali? - Oromia Broadcasting Network - OBN
Sababoonni dhibee ilkaaniif nama saaxilan hoo?
Ilkaan keenya midhagina isaa akkuma qabatetti akka turuuf hoo maal gochuu qabna?
Dhibeen ilkaanii foolii afaanii hamaa fiduu danda’aa? yoo ta’e haala kamiin ofirraa ittisuun danda’ama ?
Dhukkuba ilkaanii akkamitti wal’aanuun danda’ama kan jedhuu fi dhimmoota walqabatan biroo irratti qophii heloo doktor OBN irratti radiyoon ogeessa waliin boru dilbata sa’aa 4:30-6:00 isiniif dhiheessina. Boru nu eeggadhaa!
Total Hits : 53910